Oday Cabdiraxmaan Faroole: ”Madaxweyne Gaasoow soolaaban mayside maxaad nooga tagaysaa? (dhegayso) – Radio Daljir
Diseenbar 30, 2018 5:17 g 2
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ahna Xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare ee Soomaliya ayaa dhaliil kulul dusha uga turay madaxweynaha xilkiisa sii dhamaanaya ahna musharrax Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas.
Faroole ayaa sheegay in madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu ku fashilmay mashaariicdii hormarineed ee Puntland sida kaabayaasha dhaqaalaha siiba saddexdii mashruuc ee ugu weynaa ee ahaa Garoonka Garoowe, Jaamacada Maakhir iyo waddada isku xirta Garoowe iyo Gaalkacyo.
Faroole ayaa ku daray in Gaas uu ku fashilmay xilkii loo igmaday, maanta Puntland ay ka liidato maalintii uu xilka ku wareejiyay.
Faroole ayaa ku sii daray in liidashada Puntland intii Gaas hoggaanka hayey ay maanta ku caddahay qiimaha sarrifka doolarka oo maalintii uu xilka Gaas ku wareejinayay doolarku ahaa 23 kun oo shilin maantana uu yahay 38 kun.
Faroole ayaa ku sii daray in Gaas intaas oo liidasho ah uu ku darsatay asaga oo daabacday lacag beenabuur ah, keensadayna makiinad uu lacagta ku daabacdo.
Musharaxiinta doorashada Puntland oo ka digay faragalin Siyaasadeed
RaymondGaf 4 months
To processed click on the trammels under
Wagas 4 months
War kan dad Karoon oo ceshta Ciise MA leh miyaa